यस कारणले सुरक्षित छ डिजिटल हस्ताक्षर र डिजिटल प्रमाण पत्र, थाहा पाउनुस् कसरी काम गर्दछ - Technology Khabar
» यस कारणले सुरक्षित छ डिजिटल हस्ताक्षर र डिजिटल प्रमाण पत्र, थाहा पाउनुस् कसरी काम गर्दछ
हामीले यसअघि डिजिटल हस्ताक्षर के हो र डिजिटल प्रमाण पत्र भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिएका थियौं ।
अब भने यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर र डिजिटल प्रमाण पत्र किन प्रयोग गरिन्छ र यसका फाइदाहरु के हुन भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं ।
देशभित्र गरिने सूचना आदानप्रदान ,बिद्युतीय माध्यमबाट गरिने कागजातको आदानप्रदान, भण्डारण र कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने यी सूचना प्रविधि र उपकरणहरुको बारेमा हुने जानकारीले हरेक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
थाहा पाउनुस् डिजिटल हस्ताक्षर र डिजिटल प्रमाण पत्रको बारेमा थप जानकारी
हामी डिजिटल हस्ताक्षर किन प्रयोग गर्छौं ?
डिजिटल हस्ताक्षर भनेको हस्ताक्षरको एक इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर हो जुन सन्देशको प्रेषक वा कागजातको हस्ताक्षरकर्ताको पहिचान प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसले पठाइएको सन्देश वा कागजातको मूल सामग्री परिवर्तन भएको छैन भनेर पनि सुनिश्चित गर्दछ।
डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाण पत्र के हो ?
डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकल सूटको एक मानक तत्व हो, र सामान्यतया सफ्टवेयर वितरण, वित्तीय लेनदेन, सम्झौता व्यवस्थापन सफ्टवेयर, र अन्य मामिलाहरू जहाँ कानूनी मान्यता आबस्यक पर्छ र जालसाजी वा छेडछाड हुने सम्भावना रहन्छ त्यहाँ जालसाजी वा छेडछाड पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ।
डिजिटल प्रमाण पत्रले वेब पृष्ठ वा कागजातमा के थप्छ?
प्रामाणिकता– आजको युगमा जहाँ ईमेल वा वेबसाइट नक्कली बनाउन सकिन्छ, डिजिटल प्रमाणपत्रले तपाईंको सन्देश यसका प्राप्तकर्ताहरूमा आउँछ भनेर निश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। SSL प्रमाणपत्रले तपाईंको वेबसाइट ईन्क्रिप्ट गर्दा S/MIME ईन्क्रिप्ट हुन्छ र तपाईंको ईमेलहरू र कागजात हस्ताक्षर गर्ने प्रमाणपत्रहरूले तपाईंको कागजातहरू डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर गर्दछ र प्रमणिकत प्रदान गर्छ।
के डिजिटल हस्ताक्षरको प्रतिलिपि बनाउन सकिन्छ?
डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलोजीमा आधारित छ जसले अधिक कागजात सुरक्षा र हस्ताक्षर गर्ने प्रामाणिकता प्रदान गर्दछ। प्रत्येक डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता र कागजातको लागि यूनिक हुन्छ, तपाईं इनसेक्योर्ड हस्ताक्षर जस्तो एक कागजातबाट अर्को कागजातमा हस्ताक्षर प्रतिलिपि बनाउन र टाँस्न सक्नुहुन्न्।
के DSC प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ ?
DSC को प्रतिलिपि बनाउन सकिँदैन्।
बिद्युतीय हस्ताक्षर ( Digital Signature ) भने सबैसँग सेयर गर्न सकिन्छ। यसले केवल तपाईंको सार्वजनिक कुञ्जीलाई समावेश गर्दछ र तपाईंको डिजिटल हस्ताक्षर मान्यिकरण गर्नका लागि यो आवश्यक छ। यद्यपि यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कसैको साथ तपाइँको निजी कुञ्जी (Private Key ) साझेदारी गर्नुहुन्न भन्ने सुनिश्चित हुनुहोस्। त्यो निजी कुञ्जी Crypto token मा प्रदान गरिने वा राखिने हुँदा निजी कुञ्जी (Private Key ) साझा गर्न सजिलो पनि छैन र आबश्यक पनि छैन। यो (सामान्यतया) USB क्रिप्टो टोकनमा भण्डारण हुनेछ, जुन तपाईं डिजिटल साइनिङ्गको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ।
के हुन्छ यदि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र हरायो भने ?
१: नयाँको लागि आवेदन दिनुहोस्; आईसीए वेबसाइटमा उस्तै दर्ता गर्नुहोस्। पुरानो DSC स्वचालित रूपमा ब्लक हुनेछ।
२: यदि तपाईंसँग DSC सिरियल नम्बर छ भने DSC रद्द गर्नुहोस्।
३: यदि सबै DSC धोखाधडीमा प्रयोग गरिएको छ भने, साइबर अपराध विभागमा एफआईआर उजूरी दर्ता गर्नुहोस्।
डिजिटल हस्ताक्षरको महत्व के हो?
डिजिटल हस्ताक्षरले कागजातको नक्कल वा परिवर्तनको जोखिम कम गर्दछ। डिजिटल हस्ताक्षरले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रयोगकर्ताको हस्ताक्षरहरू प्रमाणित, प्रामाणिक र वैध छन्। हस्ताक्षरकर्ताहरूलाइ पिन PIN, पासवर्ड र कोडहरू प्रदान गरिन्छ जुन उनीहरूको पहिचान प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग गर्न सक्दछन र तिनीहरूको हस्ताक्षर स्वीकृत गर्दछ।
डिजिटल हस्ताक्षरका मुख्य फाइदाहरू के हुन्?
इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर प्रयोगको तीन मुख्य फाइदाहरूमा छन जसमा करारको गतिमा वृद्धि, थप सुधारिएको सुरक्षा, र न्यून लेनदेन लागतहरू समावेश छन्, यसले कागजविहीन हुन सजिलो बनाउँछ।
के एक व्यक्तिसँग २ वटा DSC हुनसक्छ ?
हो, एक व्यक्तिसँग दुई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) हुन सक्छ र यो त्यस व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ जुन उसले व्यक्तिगत उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ र कुन औपचारिक उद्देश्यका लागि हो भन्ने ।
डिजिटल हस्ताक्षर कहाँ र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
हामी निम्न कार्यका लागि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्न सक्छौं:
डिजिटल हस्ताक्षर गरिएको र ईन्क्रिप्टेड ईमेलहरू पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि।
सुरक्षित वेब-आधारित लेनदेन गर्नका लागि, वा वेब-आधारित लेनदेनको अन्य सहभागीहरूको पहिचान गर्न।
ई टेन्डरिङ्ग ईप्रोक्यूरमेन्ट, OCR [रजिष्टर कम्पनीहरुको दर्ताको लागी], आय कर [आय कर फिर्ताको ई-फाइलिङ्गको लागी] एप्लिकेसनहरु र अरु धेरै एप्समा।
एमएस वर्ड फाइल, एमएस एक्सेल फाइल र पिडिएफहरू जस्तो कागजातमा हस्ताक्षर गर्न।
कागजविहीन अफिस सिर्जना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ।
हामीले डिजिटल हस्ताक्षरहरू किन प्रयोग गर्नुपर्दछ ?
एउटा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रले तपाइँको इलेक्ट्रोनिक पहिचान प्रमाणित गर्दछ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर आदानप्रदान गरिएको जानकारीको पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित गरेर यसले तपाइँलाई तपाइँको अनलाइन लेनदेनको लागि उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दछ । तपाईं सूचनाहरु ईन्क्रिप्ट गर्न प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन केवल उद्देश्यसहितको प्राप्तकर्ताले मात्र पढ्न सक्दछ। तपाई डिजिटली जानकारी प्राप्तकर्तालाई आश्वास्त पार्न हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ कि यो ट्रान्जिटमा परिवर्तन गरिएको छैन, र प्रेषकको रुपमा तपाईको पहिचान प्रमाणित गर्दछ।
कसरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रहरूले काम गर्दछन् ?
एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रले स्पष्टरुपमा एक व्यक्ति/उपकरणको पहिचानलाई इलेक्ट्रोनिक कुञ्जीहरूको साथ जोड्दछ – सार्वजनिक र निजी कुञ्जीहरू- र यो CA द्वारा प्रमाणित हुन्छ। प्रमाणपत्रमा प्रयोगकर्ताको पहिचानको बारेमा जानकारी हुन्छ (उदाहरणका लागि उनीहरूको नाम, देश, ईमेल ठेगाना, प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र प्रमाणिकरण प्राधिकरणको नाम जसले यो जारी गरियो।)
यी कुञ्जीहरू एक अर्काको परिपूरक हुन्छन् जुन एक अर्कोको अनुपस्थितिमा कार्य गर्दैनन्। तिनीहरू ब्राउजरहरू र सर्भरहरूद्वारा जानकारी ईन्क्रिप्ट गर्न र सूचना विनिमय प्रक्रियाहरूको बखत प्रमाणपत्र प्रयोगकर्ताको पहिचानको सम्बन्धमा सूचना डिक्रिप्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। निजी कुञ्जी प्रयोगकर्ताको कम्प्यूटर हार्ड डिस्क वा टोकन जस्तो बाह्य उपकरणमा भण्डारण गरिएको हुन्छ। प्रयोगकर्ताले निजी कुञ्जीको नियन्त्रण कायम राख्छ; यो केवल जारी गरिएको पासवर्डको साथ मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक कुञ्जी ईन्क्रिप्टेड सूचनाहरुका साथ फैलिएको हुन्छ। यदि यी मध्ये एउटा कुञ्जी उपलब्ध छैन वा एकआपसमा मेल खाँदैनन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया असफल हुन्छ। यसको अर्थ यो छ कि ईन्क्रिप्टेड डाटा डिक्रिप्ट गर्न सकिदैन र यसैले अनधिकृत पार्टीहरूलाई यसमा पहुँच हुनेछैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा उपयोगहरू:
भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै। (केहि उदाहरणहरू)
ई-टेन्डर – सार्वजनिक खरीद
एमसीए (आरओसी) – कम्पनी दर्ता
आय कर – आय कर दाखिल
जीएसटी फाइलिंग – जीएसटी फाइलिंग
वैदेशिक व्यापारको लागि
कागजविहीन डिजिटल हस्ताक्षर (लगभग सबै सरकारी विभागहरूमा कार्यप्रवाह)
आईपिआर (ट्रेडमार्क र प्याटेन्ट)
वैदेशिक राष्ट्रिय डीएससी
लगभग सबै बैंकहरूको कार्य प्रवाहका लागि
यसका साथै अन्य मुलुकहरु चीन, श्रीलंका, बंगलादेश र अन्य मुलुकहरुमा ५ देखि १० वर्ष अगाडी नै डिजिटल हस्ताक्षरहरू शुरु गरिसकिएको छ ।
त्यसैगरि अमेरिका, फिनल्याण्ड स्वीडेन बेलायत, नेदरल्याण्ड क्यानाडालगायतका अधिकांश देशहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई स्पष्टिकरण पत्र, दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्णय नगर्न निर्देशन
आइफोन प्रयोगकर्ताहरु होशियार, प्रांक भिडियोले फोन नै बन्द हुने